‘संघीयतामा कर्णालीका मिडिया’ बहसमा कसले के भने ? – HostKhabar ::
‘संघीयतामा कर्णालीका मिडिया’ बहसमा कसले के भने ?
by ईश्वर अधिकारी
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाबीच ‘संघीयतामा कर्णालीका मिडिया’ विषयक छलफल गरिएको छ ।
सेतीबराह सञ्चार क्लबले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा जवाफदेही वक्ताका रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं कान्तिपुर दैनिकका कर्णाली ब्यूरो प्रमुख कलेन्द्र सेजुवाल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं कर्णालीपत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक सूर्यमणी गौतम तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभागका उपप्राध्यापक भानु अधिकारी सहभागि थिए ।
वक्ताहरूले कर्णालीको मिडिया हिजो, आज र भोलीको अवस्था, प्रदेश सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयनमा मिडियाको भूमिका लगायत विषयको सेरोफेरोमा रहेर अन्य सहभागिसँग मन्तब्यसहितको अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
क्लबका सञ्चालक खगेन्द्र सुनारले सहजीकरण गरेको छलफलमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार, मिडिया सञ्चालक गरी झन्डै ४० जनाको सहभागिता थियो ।
पढ्नुहोस्, छलफलमा जवाफदेही वक्ताले बोलेका कुराको सम्पादित अंश ।
♦अहिलेको पत्रकारिता हुलाकी र पत्रकार कार्यक्रममुखी भए ।
♦पत्रकारिता खोज अनुसन्धानमा केन्द्रीत हुन सकेन ।
♦पढेर र परेर दुबै तरिकाले पत्रकारिता गरौं ।
♦मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताले मात्रै समाज रुपान्तरण योगदान पुग्छ ।
♦संविधानको मर्मअनुरुप आफूलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्ने पहिलो संस्था पत्रकार महासंघ हो ।
♦सुर्खेतमा फस्टाएको पत्रकारिता संघीयताको प्रतिफल हो ।
♦संघीयतकाकै कारण मिडिया सञ्चालनको उत्साह थपिएको छ ।
♦प्रदेश सरकार अल्मलिएझैं हामी (पत्रकार) पनि मिडियाले उठाउने विषयवस्तु र इस्युमा अल्मलिने गरेका छौं ।
♦सञ्चार माध्यममा लगानी, दिगोपन र सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका बारेमा सरकार पनि जिम्मेवार र सहयोगि बन्नुुप¥यो ।
♦मिडियाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्रै आवाजबिहीनका आवाज बाहिर आउन सक्छ ।
♦संघीयता भनेको शासन व्यवस्था मात्र नभइ हरेक क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण हो ।
♦मुलुकको हरेक परिवर्तन र खासगरी संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा मिडियाको उल्लेख्यि भूमिका छ ।
♦सुर्खेतलगायत कर्णालीको पत्रकारितामा बढ्दो उत्साह, राष्ट्रिय पत्रिकाले प्रदेश संस्करणको सुरुवात गर्नु लगायत मिडियामा अहिले देखिएका परिवर्तन संघीयताकै प्रतिफल हुन् ।
♦संघीयताको मर्मअनुरुप मिडियाले काम गरिरहेका छन् ।
♦स्रोत, दक्ष जनशक्ति, बजारीकरण र दिगोपन कर्णालीका मिडियाको मुख्य चुनौती हो ।
♦मिडियामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गर्न र पत्रकारलाई टिकाउ र बिकाउ बनाउन सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक इन्सिच्यूटहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
♦मिडियाको स्तरोन्नतीमा प्रदेश सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्छ । मिडिया सशक्त भएमात्रै सरकारका काममा सहयोग पुग्छ ।
♦हिजोभन्दा आज यहाँ (कर्णाली)का मिडिया ब्यवसायिक र पत्रकारहरू दक्ष बन्दै गएका छन् । यही उत्साह र गतिमा अघि बढ्न सके यहाँको पत्रकारिताको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।
♦संघीय व्यवस्थामा मिडियाको भूमिका के हुने र सरकारले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा चिन्तन मनन् हुनु आवश्यक छ ।
♦नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
♦अब संघीय ब्यवस्थाले माग गरेको भूमिकामा मिडियाले आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
♦मिडियाको विकास र पत्रकारको सुरक्षामा कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर छ । मिडियालाई संरक्षण गर्न सकेमात्रै संघीयता बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।
♦मिडियाको ‘प्रमोसन’लाई प्रदेश सरकारले आफ्नो दाहित्व ठानेको छ ।
♦प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानको कार्यविधि, सूचना आयोग, प्रादेशिक प्रशारण, पत्रकार दुर्घटना विमालगायतका पत्रकारिता क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।